Warehouse Supervisor | Multi World Trade Co.,Ltd ﻿
•	ပစ္စည်းအ၀င်အထွက်စာရင်းဇယားများပြုစုခြင်း၊ပစ္စည်းများစစ်ဆေးခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ရမည်။
•	နေ့စဉ် ပစ္စည်းအတင်အချ ကိစ္စရပ်များအားစီစဉ်ညွှန်ကြားနိုင်ရမည်။
•	Store အတွင်းရှိပစ္စည်းများအား စနစ်တကျ နေရာချထားခြင်း ၊သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
•	Storeတခုလုံးအားတာဝန်ယူထိန်းသိမ်းနိုင်ရပြီး ပစ္စည်းများ
•	ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု မရှိစေရန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
•	ဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်၍ လူအများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိရမည်။
•	တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ အသက် ၃၅ နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၂)နှစ်ရှိရမည်။
•	နေ့စဉ် Ground Stock များအားအမှားအယွင်းမရှိစစ်ဆေးနိုင်ရမည်။
Work location 141/145, Bo Aung Kyaw St., United Condo, Lower Middle Block,Kyauktada,Yangon.
• Research and analyse market trends, demographics, pricing schedules, competitor products, and other relevant information to form marketing strategies. • Develop marketing strategies tailored to brand’s target audiences through various marketing channels • Evaluate marketing results and provideareport on ROI after each project. • Liaise with external agencies when necessary to execute projects. • Liaise with Sales Department to develop and execute promotional events and advertising. • Maintain company's s ...
· မိမိကုန်ပစ္စည်းများကို သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ခင်းကျင်းပြသခြင်းနှင့် သိမ်းဆည်းခြင်းများကို တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ရမည်။ · Promoter လုပ်ဖူးသူများ နှင့် အိမ်သုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအကြောင� ...
• Develop concepts, graphics and layouts for product illustrations, advertising materials and websites. • Liaise with external printers onaregular basis to ensure deadlines are met and materials are printed according to requirements. • Ensure printing material types, dimensions and arrangement are as per approved design specifications. • Review designs for improvements and errors before printing or publishing. • Liaise with marketing department and develop strategies to create brand awareness among target audience ...
• Sell products by establishing contact and developing relationships with dealers. • Maintain trust and provide regular support and solutions to dealers. • Handle dealers’ feedback and service problems. • Identify product improvements or new product category by conducting market research to keep updated with industry trends, market activities and competitors. • Prepare daily reports by collecting, analysing and summarizing information. • Liaise with Marketing Department to develop and execute promotional eve ...
•	ပစ္စည်းအ၀င်အထွက်စာရင်းဇယားများပြုစုခြင်း၊ပစ္စည်းများစစ်ဆေးခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ •	နေ့စဉ် ပစ္စည်းအတင်အချ ကိစ္စရပ်များအားစီစဉ်ညွှန်ကြားနိုင်ရမည်။ •	Store အတွင်းရှိပစ္စည်းများအား စ� ...
•	လူအများနှင့်တက်တက်ကြွကြွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	ရိုးသားကြိုးစားပြီးရေရှည်လက်တွဲနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ကျောက်တံတားမြို့နယ်နှင့် သာကေတမြို့နယ်များကိုအချိန်မရွေးသွားလာနိုင်ရမည်။ Stock Accountant (Fo ...
•	လိုအပ်သောနေရာများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ပေးအပ်သောတာဝန်များကိုပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရိုးသားကြိုးစားပြီး ကုမ္ပဏီနှင့် ရေရှည်လက်တွဲနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ကျောက်တံတ� ...
• Maintain and enhance organisation’s human resources. • Develop and implement workplace policy, rules and regulations. • Establisharecruitment program, employee benefits program based on budget. • Develop and execute new employees orientation. • Identify and assess future and current training needs for all departments and setabudget for training. • Plan and execute the required training and evaluate training effectiveness (ROI). • Monitoring compliance of labour laws. • Conduct monthly payro ...
• Maintain and upkeep company’s IT and electrical devices (computers, laptops, printers, monitors, routers, mobile devices, cashless devices, CCTV, fingerprint device etc) • Troubleshoot any errors or irregularities experienced by staffs and arrange for repairs if necessary. • Record and maintain all warranties and repair histories. • Setting up and managing all computer / email accounts of organisation. • Assist with company’s work when required.
• Supervise and oversee daily showroom sales and operations. • Maintain efficient stock inventory in showroom. • Develop and improve skills of sales executives under his/her management. • Conduct regular market research to ensure showroom stays up to date with market’s price points and other brands’ situations. • Handle customers feedback and service problems. • Liaise with Marketing Manager to develop and implement promotions and events for both showroom and external venues. • Liaise with HR Manager ...
•	သွက်လက်ဖျတ်လတ်၍ရိုးသားကြိုးစားပြီးအလုပ်ကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာလ့လာသင်ယူလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ •	ကုမ္ပဏီနှင့်ရေရှည်လက်တွဲနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ကျောက်တံတားနှင့်သာကေတမြို့နယ်သို့အချိန်မရွေးသွားလာနိုင်� ...
• လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို နေရာအနှံ့သို့ ပို့ဆောင်ပေးရမည်။ • ပေးအပ်သောလမ်းကြောင်းနှင့်အချိန်ဇယားအတိုင်းလိုက်နာမောင်းနှင်ရမည်။ • ကုန်တင်၊ ကုန်ချ၊ ကုန်စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း နှင့် ကုန်ပိြု့ ...
• ကုန်ပစ္စည်းများမှာယူခြင်း၊ လက်ခံခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ အပယ်ပစ္စည်းများပြန်ပို့ခြင်း၊ ကုန်တင်ကုန်ချ၊ ထုတ်ပိုးခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်၊ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကုန်ပို့၊ spare parts များကိုပစ္စည်းမပြတ်စေရန်ပုံမှန ...
•	Account department ကိုဦးဆောင်ရမည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးဧ။် account ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်အားလုံးကို ကြည့်ရှုထိန်းသိမ်းပေးရမည်။ •	Sales & Stock များနှင့်ပါတ်သက်၍ စစ်ဆေးခြင်း၊ AP,AR Control လုပ်ခြင်း၊ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းမျ� ...
Warehouse Supervisor Logistics & Supply Chain Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Multi World Trade Co.,Ltd Logistics & Supply Chain Jobs Logistics & Supply Chain Jobs Warehouse Supervisor Jobs in Myanmar, jobs in Yangon